စျေးကွက်ရှိအထည်ကုလားကာများသို့မဟုတ်လှိမ့်သောကုလားကာများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအလိုအလျောက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးပါကကုလားကာပြုပြင်သည့်စက်ကိရိယာများမှာအမျိုးမျိုးသောအလိုအလျောက် pleating machine၊ Xiaobian သည်ကုလားထိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက်ကိုယနေ့အာရုံစိုက်သည်။ Nidong ထောက်လှမ်းရေးသည်ကုလားကာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ယခုအချိန်တွင် semi-automatic pleating machine နှင့် automatic pleating machine, automatic pleating machine အပါအ ၀ င် pleating machine သုံးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကုလားကာ pleating စက်? ၎င်းသည်သောင်းနှင့်ချီသောယွမ်မှ ၂၀၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။ Nidong အလိုအလျောက်ကုလားကာ pleating စက်၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း:
၁။ အဆင့်မြင့် pleating နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အထည်ကုလားကာအမျိုးမျိုး၏ကုလားကာခေါင်းကိုတပ်ဆင်ရန်သင့်တော်သည်။
၂။ ဂျပန်မှတင်သွင်းသည့်အပ်ချုပ်စက်၏ ဦး ခေါင်းသည်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ဒါဟာအထူအထည်၏အခြံချုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) pleats နှစ်ခု၊ pleats သုံးခုနှင့် glass pleats များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ pleats ၏အတိမ်အနက်နှင့်အကွာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
(၄) ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှု၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ input parameters များကိုသာထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ငြီးငွေ့ဖွယ်လက်စွဲစာအုပ်တွက်ချက်မှုမရှိပဲသာမန်အလုပ်သမားများသည်စက်ကိုလှပသောခြံအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်အထွက်နှုန်းကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
5. Manipulator ကိုအလိုအလျှောက်ခြံလုပ်ပြီးအပ်ချုပ်စက်သို့အလိုအလျောက်ပို့ရန်အသုံးပြုသည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးသည်လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်
၆။ တစ်မိနစ်လျှင် ၆-၈ ခေါက်ထိလုပ်နိုင်သည်။
၇။ servo motor နှင့် screw control၊ တိကျမှန်ကန်သောတွက်ချက်မှု၊ စက်လည်ပတ်မှုမျှတခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း။
၈။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှု၊ စက်၏လှပသောအသွင်အပြင်။